Tanjon’ity tetikasa ity ny hanentana sy hanabe ireo adolantsento eny anivon’ny kaolejim-panjakana eto amin’ny faritra Antananarivo ny amin’ny lanjan’ ny miralenta. Ho ampianarina hiara-hiasa ao anaty vondrona izy ireo ka hiaraka hamantatra ireo tranga maneho fiheverana na lasi-tsaina tsy mampitovy zo ny lahy sy ny vavy sy ny mety ho voka-dratsin’izy ireny. Mikendry ny fampitomboana ny fahaizana sy ny fahalalan’izy ireo koa ny tetikasa mba hahaizan’izy ireo manavaka ny vaovao voarainy amin’ireo fitaovan-tserasera sy ny haino aman-jery mba hampiasany izany amin’ny fiainana andavanandro sy amin’ny fianarany. Izy ireo koa no hanentana ny amin’ny fampiroboroana ny fahasamihafan’ny kolontsaina. Raha tsiahivina dia tamin’ny taona 2014 no nitsangana ny fikambanana “Teach For Madagascar” ary nanetsika tanora mpilatsaka an-tsitrapo Malagasy mba hiaraka hiasa hanatsara ny fanabeazana ireo olona sahirana indrindra ny ankizy sy ny tanora. Tetikasa efatra no hiasan’ny fikambanana. Ankoatra ity tetikasa Vakana ity dia misy koa ny tetikasa Santatra, izay tetikasa fampianarana mamaky teny sy manoratra natao ho an’ireo ankizy tsy afaka mianatra sady miaina an-dalambe; teo koa ny tetikasa Kolo izay tetikasa fanampiny napetraka ho fanohanana ny fandaharam-pianarana ôfisialy any anivon’ny sekoly fanabeazana fototra ary ny tetikasa Jary, izay tetikasa fanohanana ny fandaharam-pianarana ofisialy any amin’ireo liseam-panjakana any amin’ny tontolo ambanivohitra. Nialoha ny fanombohan’ny tetikasa VAKANA dia nisy ny fotoana natokan’ny fikambanana hanofanana ireo ZOKY mpilatsaka an-tsitrapo izay hitarika sy hanatanteraka ny tetikasa mba ahaizan’izy ireo miara-miasa amin’ny fampitana ny hafatra tiana hampitaina ireo tanora sy hamaha ny olana mety hitranga ao anatin’izany. Haharitra telo volana eo ity tetikasa ity ka mpianatra manodidina ny 150 eo no horaisin’izy ireo an-tanana. Heverina fa hisy fiantraikany amin’ireo tanora Malagasy 12 ka hatramin’ny 15 taona ity tetikasa ity.